Mpamatsy valizy mifono havoana - China Manufacturer VALVE FIRE HYDRANT
COUPLING FIASA HOSO
REEL HOSE REEL SY CABINET
VALVE HYDRANT FIRE
Valizy mihantona Din miaraka amin'ny stor ...
Fidirana amin'ny lalana 4 lalana
Valizy mitaingina TCVN
Famaritana: valizy mitaingina TCVN dia valizy 45 degre natao mifanaraka amin'ny fenitra TCVN. Ny haben'ny fidirana sy ny haben'ny fivoahana dia kofehy BSP. Ny habe lehibe dia 50mm, 65mm, sns ny vatan'ny valizy sy ny kojakoja vita amin'ny varahina, izay manatsara ny fanoherana ny tsindry vokarin'ny vokatra. Ny valizy mitaingina TCVN dia ampahany amin'ny rafitra miady amin'ny afo, ary ny asany dia ny fanomezana loharano rano hiadiana amin'ny afo. Ny tsindry miasa amin'ny hydrant afo dia matetika ao anatin'ny 16bar, ary ...
Famaritana: napetraka eo ivelan'ny tranobe na faritra mora idirana ao amin'ilay trano ny fidirana Breasthing Inlets ho an'ny tanjon'ny mpamono afo mba hidiran'ny mpiasan'ny afo. Breeching Inlets dia mifamatotra hiditra amin'ny fidirana brigade afo sy ny fifandraisana outlet amin'ny teboka voalaza. Maina izy io nefa afaka ampandoavina rano amin'ny alàlan'ny paompy avy amin'ireo fitaovana fandoroana afo. Rehefa misy ny afo, ny paompin-kamon'ny kamiao mpamono afo dia afaka mampifandray haingana sy mora ...
Valantsara fitobiana Din miaraka amin'ny storz adaptatera misy satroka
Famaritana: DIN afo hydrant dia valizy 45 degre vita mifanaraka amin'ny fenitra Alemanina. Ny haben'ny fidirana sy ny haben'ny fivoahana dia kofehy BSP. Ny habe lehibe dia 25mm, 40mm, 50mm, 65mm, sns ny vatan'ny valizy sy ny kojakoja vita amin'ny varahina, izay manatsara ny fanoherana ny tsindry amin'ny vokatra. Ny hydrant dIN dia ampahany amin'ny rafitra miady amin'ny afo, ary ny asany dia ny fanomezana loharano rano hiadiana amin'ny afo. Ny tsindry miasa amin'ny hydrant afo dia matetika ao anatin'ny ...
Ny fihenan'ny tsindry karazana E
Famaritana: ny valizy mampihena ny tsindry karazana e dia karazana tsindry mifehy ny valizy hydrant. Ireo valves ireo dia misy amin'ny inlet flanged na vava inlet ary novokarina mba hanarahana ny fenitra BS 5041 Fizarana 1 misy fifandraisana amin'ny fantsom-panafody sy satroka banga mifanaraka amin'ny fenitra BS 336: 2010. Ny valizy mitaingina dia voasokajy ambanin'ny tsindry ambany ary mety ampiasaina amin'ny tsindry fidirana nominal hatramin'ny 20 bar. Ny famaranana fanariana anatiny dia misy kalitao avo lenta izay miantoka fidinana ambany ...
Fidirana amin'ny lalana 2 lalana
Famaritana: napetraka eo ivelan'ny tranobe na faritra mora idirana ao amin'ilay trano ny fidirana Breasthing Inlets ho an'ny tanjon'ny mpamono afo mba hidiran'ny mpiasan'ny afo. Breeching Inlets dia mifamatotra hiditra amin'ny fidirana brigade afo sy ny fifandraisana outlet amin'ny teboka voalaza. Maina izy io nefa afaka ampandoavina rano amin'ny alàlan'ny paompy avy amin'ireo fitaovana fandoroana afo. Key Specificatoins: ● Fitaovana: vy vy / vy vyile ● fidirana: 2.5 "BS lahy lahy eo ho eo ...
Famaritana: Ny làlambe 2 Way Fire (Pillar) dia fantsom-by afo-barika mando ampiasaina amin'ny faritra ivelan'ny serivisy famatsian-drano izay malemy ny toetrandro ary tsy misy ny mari-pana. Ny hydrant-barika mando dia misy fisokafana valizy iray na maromaro ambonin'ilay tsipika an-tany ary, amin'ny toe-javatra iasana mahazatra, ny atin'ny hydrant iray manontolo dia iharan'ny tsindry rano amin'ny fotoana rehetra. Tombontsoa manokana: ● Fitaovana: vy vy / vy vyile ● fidirana: latabatra 4 "BS 4504/4" E / 4 "ANSI 150 # ● Fivoahana: 2.5" femal ...
Valizy zoro ankavanana marina
Famaritana: valves zoro marina an-dranomasina dia karazana valves hydrant pattern globe. Ireo valva karazana ireo dia misy amin'ny alàlan'ny fidirana miolakolaka na fidirana visy ary vokarina mba hanarahana ny fenitry ny ranomasina. Ny valva zoro dia voasokajy ao ambany fanerena ambany ary mety ampiasaina amin'ny tsindry fidirana nominal hatramin'ny 16 bar. Ny famaranana fanodinana anatiny ny valva rehetra dia misy kalitao avo lenta miantoka fameperana ambany mikoriana izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitsapana rano.
Varavarana anjely havanana
Famaritana: Angle Landing Valve dia karazana valizy hydrant modely amin'ny tany. Ireo valizy mitaingina karazana zoro ireo dia misy amin'ny outlet lahy na vavy ary vokarina mba hanarahana ny fenitra FM&UL Ny valizy mitaingina Angle dia voasokajy amin'ny tsindry ambany ary mety ampiasaina amin'ny tsindry fidirana nominal hatramin'ny 16 bar. Ny famaranana fanariana anatiny dia misy kalitao avo lenta miantoka fameperana ambany izay mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fitiliana rano.
Fanoritsoritana: Oblique Landing Valve dia karazam-baravarankely hydrant pattern globe. Ireo valizy mitaingina karazana oblique ireo dia azo alefa ao anaty lozam-pifamoivoizana na tsimok'aretina ary novokarina mba hanarahana ny fenitra BS 5041 Fizarana 1 misy fifandraisana amin'ny fantsom-panafahana sy satroka banga mifanaraka amin'ny fenitra BS 336: 2010. Ny valizy mitaingina dia voasokajy ambanin'ny tsindry ambany ary mety ampiasaina amin'ny tsindry fidirana nominal hatramin'ny 15 bar. Ny famaranana fanariana anatiny dia misy kalitao avo lenta miantoka ...
Valizy mitaingina flange
Famaritana: Flange Landing Valve dia karazana valizy hydrant modely eran-tany. Ireo valizy mitaingina karazana oblique ireo dia azo alefa ao anaty lozam-pifamoivoizana na tsimok'aretina ary novokarina mba hanarahana ny fenitra BS 5041 Fizarana 1 misy fifandraisana amin'ny fantsom-panafahana sy satroka banga mifanaraka amin'ny fenitra BS 336: 2010. Ny valizy mitaingina dia voasokajy ambanin'ny tsindry ambany ary mety ampiasaina amin'ny tsindry fidirana nominal hatramin'ny 15 bar. Ny famaranana fanariana anatiny dia misy kalitao avo lenta miantoka ny ambany ...
Valizy mampihena tsindry flange
Famaritana: ny valizy mampihena ny valizy dia karazana tsindry mifehy ny valizy hydrant. Ireo valves ireo dia misy amin'ny inlet flanged na vava inlet ary novokarina mba hanarahana ny fenitra BS 5041 Fizarana 1 misy fifandraisana amin'ny fantsom-panafody sy satroka banga mifanaraka amin'ny fenitra BS 336: 2010. Ny valizy mitaingina dia voasokajy ho ambany fanerena ary mety ampiasaina amin'ny tsindry fidirana nominal hatramin'ny 20 bar. Ny famaranana fanariana anatiny dia misy kalitao avo lenta miantoka ny ambany ...